Factory sy mpamatsy lamba vita amin'ny fibre karbaona 1k | Chengyang
1k Carbon Fiber Cloth dia matanjaka be sy mavesatra be. Izy io no lamba fitambarana be mpampiasa indrindra amin'ny fampiharana amin'ny sehatry ny indostria rehetra, toy ny rindranasa ao an-trano, ny milina, ny aerospace, ny spaceflight ary ny fampiharana teknolojia avo lenta.
Lamba fibre karbaona 1k hery lehibe sy lanja maivana indrindra. Izy io no lamba fitambarana be mpampiasa indrindra amin'ny fampiharana amin'ny sehatry ny indostria rehetra, toy ny fampiharana ao an-trano, ny milina, ny aerospace, ny spaceflight ary ny fampiharana teknolojia avo lenta.
1k Carbon Fiber Cloth no tena ampiasaina
Aeronautics & Astronautics, fanamafisana ny fanamboarana
Fitaovana fanatanjahantena, kojakoja fiara, milina fitsaboana, fanamboarana sambo, maodely avo lenta
Fanamboarana ny singa enviroment enti-miasa mahery, fiarovana.
Tanjona hafa: vokatra indostrialy sy sehatra maro hafa. Aeronautics & Astronautics, fanamafisana ny fanamboarana
Tanjona hafa: vokatra indostrialy sy sehatra maro hafa.
Ao anaty amina horonana, fonosana Carton ivelany, miaraka amin'ny fiarovana spaonjy sy fonosana plastika
Previous: Lamba vita amin'ny kofehin'ny karbaona tsy mitongilana
Manaraka: Fibre karbaona 4 × 4 Twill
Lamba Fiberglass Fibre Carbon
Fibre karbaona tenona
Lamba lamba vita amin'ny ravin-kazo vita amin'ny kofehy, Fiberglass mifono akrilika, Clot Fiberglass, Lamba vita amin'ny vera vita amin'ny acrylic, Lamba Fiberglass Aluminized, Lamba vita amin'ny acrylic Fiberglass,